Ịkụziri Nwa Gị Ihe O Kwesịrị Ịma Banyere Mmanya Na-aba n’Anya | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bashkir Belize Kriol Bicol Bislama Boulou Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Maya Mongolian Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zulu
Ịkụziri Nwa Gị Ihe O Kwesịrị Ịma Banyere Mmanya Na-aba n’Anya
Otu nwoke aha ya bụ Alexander kwuru, sị: “Mgbe mbụ anyị kụziiri nwa anyị nwaanyị ihe ndị o kwesịrị ịma banyere mmanya na-aba n’anya bụ mgbe ọ dị afọ isii. O juru anyị anya na ọ ma ọtụtụ ihe gbasara ya karịa otú anyị chere.”
Ịkụziri ụmụaka banyere mmanya na-aba n’anya dị mkpa. Echela ruo mgbe nwa gị ruru afọ iri na ụma. Otu nwoke bi na Rọshịa aha ya bụ Khamit kwuru, sị: “Ọ na-ewute m na anyị ebidoghị mgbe nwa anyị nwoke dị obere kụziwere ya ihe ndị o kwesịrị ịma banyere ịṅụ mmanya na-aba n’anya. Ọ bụ mgbe ọ kpataara m nsogbu ka m matara na ọ bụ ihe m gaara eme kemgbe. Mgbe nwa m nwoke dị afọ iri na atọ, achọpụtara m na ọ na-aṅụ mmanya na-aba n’anya mgbe mgbe.”
Gịnị mere i kwesịrị iji chebara ya echiche?
Nwa gị nwere ike ịmụta ihe na-adịghị mma banyere mmanya na-aba n’anya n’aka ụmụ akwụkwọ ibe ya, ndị na-akpọsa ngwá ahịa nakwa na Tiivi.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa n’Amerịka kwuru na e kee mmanya na-aba n’anya a na-aṅụ n’Amerịka ụzọ iri, ụmụaka na-aṅụ ihe karịrị otu ụzọ.
Ọ bụ ya mere ndị na-ahụ gbasara ahụ́ ike ji agwa ndị mụrụ ụmụ ka ha malite mgbe ụmụ ha ka dị obere kụziwere ha nsogbu ịṅụ mmanya na-aba n’anya na-akpatara mmadụ. Olee otú ị ga-esi eme ya?
Chee gbasara ihe nwa gị nwere ike ịjụ gị. Ụmụaka na-achọkarị ịmata ihe. Ndị nke toturu eto na-achọdị ịmata ihe karịa. Ọ bụ ya mere i kwesịrị iji jikere ejike maka ịza ajụjụ ndị ha nwere ike ịjụ gị. Dị ka ihe atụ:
Ọ bụrụ na nwa gị chọrọ ịmata otú biya si atọ, i nwere ike ịgwa ya na biya na-akụtụ ilu.
Ọ bụrụ na nwa gị chọrọ ịṅụtụ mmanya na-aba n’anya iji mara otú ọ na-atọ, i nwere ike ịgwa ya na mmanya na-enye ụmụ ntakịrị nsogbu n’ahụ́. Gwa ya ihe ụfọdụ ọ na-eme, dị ka: Mmanya na-aba n’anya na-eme ka ahụ́ ruo mmadụ ala, ma ịṅụfe ya ókè nwere ike ime ka mmadụ na-adagharị, na-emegheri emegheri, ma ọ bụ kwuo ihe ọ ga-emecha kwaara mmakwaara.​—⁠Ilu 23:​29-35.
Mee nchọchọ iji matakwuo ihe ụfọdụ gbasara mmanya na-aba n’anya. Baịbụl kwuru, sị: “Onye ọ bụla nke maara ihe ga-eji ihe ọmụma mee ihe.” (Ilu 13:16) Mata nsogbu ịṅụ mmanya na-aba n’anya na-akpatara mmadụ, ihe iwu obodo unu kwuru banyere otú mmadụ nwere ike ịṅụru ya ma ọ chọọ ịnya ụgbọala na afọ mmadụ ga-eru tupu ya aṅụwa ya. Ọ bụ mgbe ahụ ka ị ga-enwe ike ịkụziri ya nwa gị.
Gwa nwa gị ka gị na ya kwurịta ya. Otu nwoke bi na Briten kwuru, sị: “Okwu banyere ịṅụ mmanya na-aba n’anya nwere ike ịna-agbagwoju ụmụaka anya. M jụrụ nwa m nwoke dị afọ asatọ ma ọ̀ dị mma mmadụ ịṅụ mmanya na-aba n’anya ka ọ̀ bụ na ọ dịghị. M mere ka ahụ́ ruo ya ala, o mekwara ka o medaa obi kọọrọ m ihe o chere.”
Ị ga-aka eru nwa gị n’obi ma ọ bụrụ na gị na ya ekwurita ihe gbasara mmanya na-aba n’anya ugboro ugboro. Dabere n’afọ ole nwa gị dị, i nwere ike ịkụziri ya banyere ịṅụ mmanya na-aba n’anya mgbe ị na-akụziri ya ihe ndị ọzọ, dị ka, otú ọ ga-esi akpachara anya n’okporo ụzọ nakwa ihe banyere mmekọahụ.
Bụrụ ezigbo ihe nlereanya. Ụmụaka na-amụta ihe a na-eme gburugburu ha otú ahụ fom si amịkọrọ mmiri e tinyere ya na ya. Nchọpụta ndị e mere na-egosi na ụmụaka na-emekarị ihe ndị mụrụ ha na-eme. Ọ pụtara na ọ bụrụ na ihe mbụ ị na-eme ma e nwee ihe na-echegbu gị bụ ịṅụ mmanya na-aba n’anya, nwa gị ga-ewere ya na mmanya na-aba n’anya bụ ihe e ji akwụsị nchegbu. N’ihi ya, bụrụ ezigbo ihe nlereanya. Jide n’aka na ị na-aṅụ ya ka onye nwere uche.
Ụmụ gị ga-amụta ihe n’otú i si aṅụ mmanya
“[Jehova] na-eme . . . mmanya nke na-eme ka obi mmadụ ṅụrịa ọṅụ.” (Abụ Ọma 104:​14, 15) Mmanya abụghị ihe ọjọọ, ọ bụ onyinye Chineke nyere anyị.
“Onye na-akwa emo ka mmanya bụ, ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu bụ onye mkpọtụ, onye ọ bụla nke ọ na-eme ka ọ kpafuo amaghị ihe.” (Ilu 20:⁠1) Anyị ekwesịghị ịṅụfe mmanya ókè.
“Ndị aṅụrụma . . . agaghị eketa alaeze Chineke.” (1 Ndị Kọrịnt 6:10) Chineke katọrọ aṅụrụma, ọ bụghị ịṅụ mmanya.
Baịbụl kwuru uru ụfọdụ mmanya na-aba n’anya bara.
Chee Gbasara Nsogbu Mmanya Nwere Ike Ịkpatara Gị